Electric Skateboards Zvingaita Kuti Riders Nendege - Jomo Technology Co., Ltd
Electric Skateboards Zvingaita Kuti Riders Nendege
Kana chikuru mienzaniso yakaonekwa pa pamisika, vakanga vachifunga kungotaurwa kushandiswa sezvo chizvarwa chokufambisa, ari mukuru kana iwe waida kuenda kumba kweshamwari, kusekondari, kana imwewo pakufamba kuenda kwaaishanda. Izvi nokukurumidza yemagetsi skateboardanouya aine rwemberi Disc akamedura, hombe pneumatic mugwagwa matai uye dzinofambiswa pedyo Brushless Hub Motor 350W * 2 uye 20pcs18650 High zvazvingava lithium masero Surf muguta wako uyu pasi pakati regiravhiti zvakagadzirwa! Kunyange zvazvo iwe uchava zvazviri anogona swap mabhatiri, haisi inopisa swappable setup, saka iwe unenge zvokukwekweredzwa unscrewing kuti rongedza kuti aiswe hachizi chitsva. Maererano nesimba, zvinoita sokunge angatitungamirira kurongedza zvakarurama imwe yepanchi sezvo zviri kukwanisa kuita pamusoro aimhanya 26mph. Inoita kushandiswa Manta Drive anoziva izvo haashandisi gearing kana mabhandi. Zvakanyorwa akagadzirirwa kushandiswa pamusoro kwose terrains, kuva mukuru nokuda mafaro kuti vanofanira kuwana kunyanyisa aimhanya ari pretentious terrains.
By nzira yokuenda kukurumidza uye achibhururuka kukwira nokuzvikomo, kuva mukuru ane anopenga kwazvo voltage hombe injini achaita dzose nguva takunda Zvisinei unoda skateboard rako kutarisa uye ruzivo somumwe sezvo zvinobudirira. Zvisinei kana uchida wemagetsi skateboard riri duku, munyoro, uye vanganzi shoma cost, kuti broken-bhendi (KOOWHEEL muchiso) yemagetsi skateboard ndiyo yakanakisisa sarudzo yako zvino. The broken-bhendi skateboard paIndaneti chitoro kukupa dzinotevedzana yemagetsi hoverboard , kusanganisira mbiri vhiri kuzviremekedza vakadengezera sikuta , shangu yemagetsi sikuta uye Hottest mavhiri mana yemagetsi longboard . Zvino kuti tine ose chikamu yokusuma panzira, tiri kuenda tarisa yepamusoro uye kugonesesa waivako dzemagetsi Skateboards wanika ikoko, uye kuona mutengo ivo chitoro musi broken-bhendi yezvitoro.
Vazhinji izvi idzva yemagetsi hoverboard zvinodzorwa nevanhu kure, MAKARALI USB kure, izvo kunokubatsira mhanyisa kana kuvhuna ane nzwisisa thumbwheel, uye zvakare chakaita zviratidzo ndikuratidze sei zvizhinji muto ungave chakasara yenyu yemagetsi skateboard. Rimwe vazhinji coolest zvaiva broken-bhendi ( Koowheel ) ndiko kuti ayo Anwendung achibvumira vatasvi kutsiva firmware weboard wirelessly nenzira Makaralı. Chokwadi, ichi chaiva wakaipa chaizvo pfungwa kuyera waivako varege kutaura mureza bhodhi uye nzira pakati pamapuranga hadzina kukurukurwa.
Post nguva: Mar-15-2018